मिथुन कुंडली Archives - सत्य वेद पुुस्तकहरू
Tag: मिथुन कुंडली
मिथुन ल्याटिनमा जुम्ल्याहा हो र दुई व्यक्तिको तस्बिरले बनाउँदछ, प्राय: जसो जुम्ल्याहा पुरुषहरूले (तर प्राय: सँधै) होइन। प्राचीन राशिको आधुनिक ज्योतिषशास्त्र राशिफल पढ्ने क्रममा, तपाईंले मिथुन राशिको प्रेम, सौभाग्य, स्वास्थ्य र तपाईंको व्यक्तित्वमा अन्तर्दृष्टि पाउनको लागि कुंडली सल्लाह अनुसरण गर्नुहुन्छ।
तर मिथुन पूर्वजहरूका लागि के अर्थ थियो?
सचेत रहनुहोस्! यसको उत्तरले तपाईंको ज्योतिषालाई अप्रत्याशित तरिकामा खोल्दछ -जब तपाईं कुण्डली जाँच गर्नुहुन्छ तपाईंले आफूलाई फरक यात्रामा संलग्न भएको पाउनुहुन्छ …
हामीले प्राचीन ज्योतिषको अन्वेषण गर्‍यौं र प्राचीन कुंडलीको कन्याबाट वृषभसम्मको जाँच गरेपछि हामी मिथुनसँगै जारी राख्छौं।
ताराहरुमा मिथुन नक्षत्र
मिथुन बनाउने तारा नक्षत्रको यो तस्वीर अवलोकन गर्नुहोस्। के तपाईं ताराहरूमा जुम्लेकोजस्तै केहि देख्न सक्नुहुन्छ?
मिथुन तारा नक्षत्रको फोटो। के तपाईं जुम्ल्याहा देख्न सक्नुहुन्छ?
यदि हामी मिथुनमा ताराहरूलाई रेखाहरूका साथ जोड्छौं भने यो अझै देख्न कठिन छ। हामी दुई व्यक्ति देख्न सक्छौं, तर कसरी ‘जुम्ल्याहा’ देखा पर्‍यो?
रेखाहरु द्वारा जोडिएको ताराहरूसंग मिथुन नक्षत्र
यहाँ उत्तरी गोलार्धमा मिथुन राशिको राष्ट्रिय भौगोलिक ठूलो चित्र छ ।
गोलोले लगाइएको मिथुन राशिको साथ राष्ट्रिय भौगोलिक राशि तारा तालिका
रेखाहरु द्वारा मिथुन बनाउने ताराहरूलाई पनि जडान गर्दा जुम्ल्याहा देख्न अझै गाह्रो हुन्छ। तर हामीलाई जहाँ सम्म थाहा छ मिथुन मानव इतिहासमा पछाडि फर्केर जान्छ ।
धेरै पहिले क्यास्टर र पोलक्स
बाइबलले मिथुनलाई उल्लेख गर्छ जब पावल र तिनका साथीहरू जहाजमा रोमको यात्रा गर्दै थिए र तिनीहरूले टिप्पणी गरे
मिस्त्रीमा क्यास्टर र पोलक्स दुई जुम्ल्याहाका परम्परागत नामहरू छन्। यसले 2000 वर्ष पहिले दिव्य जुम्ल्याहाको विचार सामान्य भएको देखाउँदछ।
अघिल्लो राशी नक्षत्रहरुमा जस्तै, दुई जुम्ल्याहाको तस्बिर नक्षत्रबाट सिधै स्पष्ट हुँदैन। यो तारा नक्षत्र भित्र जन्मजात छैन। बरु, जुम्ल्याहाको विचार पहिले आयो। पहिले ज्योतिषीहरूले यो विचारलाई चिन्हको रूपमा ताराहरूमा एक माथि अर्को राखे। पूर्वजहरुले मिथुनलाई उनीहरूका बच्चाहरूलाई औंल्याउन र जुम्ल्याहा बच्चाहरूसँग सम्बन्धित कथा बताउन सक्थे। यो यसको मूल ज्योतिषीय उद्देश्य थियो जुन हामीले यहाँ देख्यौं।
तर यसको मूल अर्थ के थियो?
तलको तस्बिरले मिश्रमा डेन्डेरा मन्दिरको राशिमा मिथुनलाई देखाइएको छ जुन रातोले गोलो लगाइएको छ । तपाईले छेउको रेखाचित्रमा दुई व्यक्ति पनि देख्न सक्नुहुन्छ।
गोलो लगाइएको मिथुनको साथ डेन्डेराको प्राचीन मिश्री राशि
प्राचीन डेन्डेरा राशि चक्रमा दुई जना मध्ये एउटी महिला हुन्। दुई पुरुष जुम्ल्याहाको सट्टामा यस राशिले मिथुनको रूपमा एक पुरुष र महिला जोडी देखाउँदछ।
यहाँ मिथुन राशिको केहि सामान्य ज्योतिषशास्त्र तस्बिरहरु छन्
मिथुन ज्योतिषशास्त्र तस्बिर – सँधै जोडी तर आज पनि कहिलेकाँही पुरुष / महिला
किन प्राचीन समयदेखि मिथुन सधैं जोडी भए? तर सधै पुरुषहरु जुम्ल्याहा हुँदैनन्?
पुरानो कथामा मिथुन
हामीले देख्यौं कि बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरले नक्षत्रहरूलाई कथा बनाउने योजनामा बनाउनुभयो जुन कन्यामा शुरू भयो र नक्षत्रहरूको माध्यमबाट जारी भयो।
मिथुनले यस कथालाई जारी राख्छ। यदि तपाईं आधुनिक राशिफल अर्थमा मिथुन हुनुहुन्न भने पनि मिथुन ताराहरूको प्राचीन जोतिषिए कथा जान्न लाभदायक छ।
मिथुनको मूल अर्थ
मिथुन ताराहरूको नामले हामीलाई यसको वास्तविक अर्थ प्रकट गर्दछ। पछि मिथुनसँग सम्बन्धित ग्रीस र रोमन मूर्तिपूजक मिथकहरूले यसको मूल अर्थलाई बटारेका थिए।
मध्ययुगीन अरबी ज्योतिषीहरूले प्राचीन कालदेखि नक्षत्र ताराहरूलाई नाम दिए। अरबीमा रहेको तारा “कास्टर” लाई अल-रस अल-ताउम अल-मुकादिम वा “अग्रणी जुम्ल्याहा प्रमुख” भन्ने नाम दिइएको छ। क्यास्टरको प्रख्यात तारा तेज पोस्टरियर हो जसको अर्थ “पछाडिको खुट्टा” हो, क्यास्टरको खुट्टालाई जनाउँछ। यसलाई कहिलेकाँही काल्क्स को रूपमा पनि चिनिन्छ जुन “एडी” को अर्थ हुन्छ। अर्को प्रख्यात ताराको परम्परागत नाम मेब्सुटा छ जुन पुरानो अरबी माब्साहबाट आउँदछ, जसको अर्थ हो “फैलिने पञ्जा।” अरबी संस्कृतिमा, मब्साहाहले सिंहको पन्जाहरुलाई प्रतिनिधित्व गरे।
पोलक्सलाई “दोस्रो जुम्ल्याहाको प्रमुख” को रूपमा चिनिन्छ, अरबी बाट अल-रस अल-तौम अल-मु’खर हुन्छ। अर्थ एकै समयमा दुईको धेरैको जन्म हुँदैन, बरु दुई पूरा भएको वा जोडिएको हुन्छ । मोशाको नियमले उही शब्द प्रयोग गर्दछ जहाँ करारको ठूलो नाउमा दुईवटा तखताको बारेमा भनिएको छ
ती तलदेखि माथिसम्‍म दोबर खप्‍टाइएका होऊन्, र यसरी ती एउटै मुन्‍द्रामा जोड़िऊन्‌। ती दुवै फल्‍याक यस्‍तै होऊन्‌।
जसरी ठूलो नाउको तखताहरु दुइवटा हुन्छन्, त्यसैले मिथुनमा जन्मने वित्तिकैको समयमा होइन,तर सम्बन्ध द्वारा दुईजनालाई एक साथ ल्याइन्छ। किनकि क्यास्टरलाई येशू ख्रीष्टको दुबै भविष्यवाणीहरू ‘कुर्कुच्चा’ (वृश्चिक) र ‘सिंहको पंजा’ (सिंह) को साथ चिनाइएको छ, त्यसबेला क्यास्टर येशूको आगमन भएको येशूको ज्योतिषीय चित्र हो।
तर उहाँसँग को सामेल हुनहुन्छ?
लेखहरूले दुईवटा तस्बिरहरू दिन्छन जुन मिथुनको दुई चित्रहरु लाई वर्णन गर्दछ
• १) एकताबद्ध भाइहरू
• २) एक पुरुष-महिला जोडी।
मिथुन – पहिला जन्मेको…
सुसमाचारको पुस्तकले येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउँछ कि
उहाँ अदृश्‍य परमेश्‍वरको प्रतिरूप, सारा सृष्‍टिका ज्‍येष्‍ठ हुनुहुन्‍छ,
‘पहिलो जन्मिनु’ ले संकेत गर्दछ कि अरु पछि आउनेछन्।
जस-जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्‍नुभएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्‍ना पुत्रको रूपसमान बनाउनलाई, धेरै भाइहरूमध्‍ये उहाँचाहिँ ज्‍येष्‍ठ होऊन्‌ भनेर, अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो।
यो चित्र पछाडि सृष्टि भएको समयमा जान्छ । जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो
परमेश्वरले आदम / मनुलाई परमेश्वरको एक अत्यावश्यक आध्यात्मिक समानतामा सृष्टि गर्नुभयो। त्यसैले आदम भनिन्छ
केनान एनोशका छोरा, एनोश शेतका छोरा, शेत आदमका छोरा, आदम परमेश्‍वरका छोरा थिए।
… र अपनाइएको मिथुन भाइहरू
जब आदमले परमेश्वरको आज्ञा उल्लंघन गरे यसले यस समानतालाई मार्मिक तुल्यायो र हाम्रो सन्तानलाई नष्ट गर्‍यो। तर जब येशू ख्रीष्ट “पहिला जन्मेको छोरा” को रूपमा आउनुभयो यसले तस्बिर पुनर्स्थापित गर्यो। त्यसैले अब येशू मार्फत …
१२.तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्‍वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्‍वरका सन्‍तान हुने अधिकार दिनुभयो।१३. तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्‍छाद्वारा, र कुनै मान्‍छेको इच्‍छाद्वारा होइन तर परमेश्‍वरबाट जन्‍मिएका हुन्‍छन्‌।
यूहन्ना १: १२–१३
हामीलाई दिइएको उपहार ‘परमेश्वरको छोराछोरीहरू बन्नु’ हो। हामी परमेश्वरका सन्तानहरू थिएनौं तर येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले हामीलाई अपनाएर हामी उहाँको छोराछोरी बन्दछौ।
तर समयको पूर्णतामा परमेश्‍वरले आफ्‍ना पुत्रलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटी स्‍त्रीबाट जन्‍मनुभयो, तथा व्‍यवस्‍थाको अधीनमा जन्‍मनुभयो।
यो तुला राशिफल पठन थियो। पहिलो पुत्र येशू ख्रीष्टको उपहार मार्फत, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको छोराछोरीको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ।
आफ्नो आगमनपछि येशू ख्रीष्ट राजाको रूपमा शासन गर्नुहुनेछ। बाइबलले अपनाइएको सानो भाईको भूमिकाको यो दर्शनको साथ बन्द गर्दछ।
त्यहाँ फेरि रात हुनेछैन, तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्‍यालो चाहिनेछैन, किनकि परमप्रभु परमेश्‍वर नै तिनीहरूको उज्‍यालो हुनुहुनेछ, र तिनीहरूले सदासर्वदै राज्‍य गर्नेछन्‌।
यो बाइबलको लगभग अन्तिम वाक्य हो किनकि यसले सबै चीजहरूको पूरा भएको देख्दछ। त्यहाँ यसले धर्मपुत्र भाइहरूले पहिलो छोराको साथ शासन गरेको देखिन्छ। मिथुनले स्वर्गमा पहिलो र दोस्रो दाज्यूहरुको रूपमा शासन गरिरहेका यो चित्रण धेरै अघि पूर्वजहरूलाई भनेका थिए ।
मिथुन – पुरुष र महिला एकजुट
बाइबलले पुरुष र स्त्रीको बिहेको बन्धनलाई पनि ख्रीष्ट र उहाँसँग हुनेहरू बीचको सम्बन्धलाई चित्रण गर्न प्रयोग गर्दछ। हव्वाको सृष्टिको विवरण र आदमसँग सृष्टि हप्ताको शुक्रबारमा विवाहको विवरणले ख्रीष्टसँगको यो मिलनको पूर्वचित्रण गर्‍यो। सुसमाचारको थुमा (मेष) र उनको दुलही बीच यो विवाह चित्र संग समाप्त हुन्छ।
अन्तको अध्यायले यो निम्तो दिन्छ जस्तो यो थुमा र उहाँको दुलहीको ब्रह्माण्ड मिलन देखिन्छ
पवित्र आत्‍मा र दुलही भन्‍नुहुन्‍छ, “आउनुहोस्‌।” जसले सुन्‍छ त्‍यसले भनोस्, “आउनुहोस्‌।” जो तिर्खाउँछ त्‍यो आओस्, जसले इच्‍छा गर्छ त्‍यसले जीवनको पानी सित्तैँमा लिओस्‌।
प्रकाश २२: १७
कुम्भले विवाह गर्नेछ र उहाँले हामीलाई ती दुलही हुन आमन्त्रित गरिरहनु भएको छ, मिथुनको साथ धेरै अघि चित्रण गरिएको थियो कि थुमा र उहाँको दुलहीको ब्रह्माण्डको मिलन।
राशिफल ग्रीक”होरो” (घण्टा)बाट आएको हो र यसको अर्थ पवित्र घण्टा (स्कोपस)को चिन्हित गर्नु हो। येशूले विवाह भोजको कथामा मिथुन घण्टा (होरो) लाई चिन्हित गर्नुभयो।
१. “तब स्‍वर्गको राज्‍य दश कन्‍याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्‍छ। तिनीहरूले आ-आफ्‍नो बत्ती लिएर दुलहालाई भेट्‌न निस्‍के।२. तीमध्‍ये पाँच जना निर्बुद्धि र पाँच जनाचाहिँ बुद्धिमती थिए। ३.किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्‍ना बत्ती लगे, तब तिनीहरूले साथमा तेलचाहिँ लगेनन्‌।४.तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्‍ना बत्तीसँगसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। ५.दुलहाले बियाँलो गर्दा ती सबै निद्राले लट्ठ भए र निदाए।६. “तर मध्‍यरातमा ‘हेर दुलहा, उनलाई भेट्‌न आओ,’ भन्‍ने आवाज आयो। ७. “तब ती सबै कन्‍याहरू ब्‍यूँझे, र आ-आफ्‍नो बत्ती ठीकठाक पारे। ८.निर्बुद्धि कन्‍याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, ‘तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देओ, किनभने हाम्रा बत्ती त निभ्‍न लागे।’९. “तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाफ दिए, ‘हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्‍ने यथेष्‍ट तेल छैन होला, बरु पसलेकहाँ जाओ र आफ्‍नो लागि किन।’१०. “तिनीहरू किन्‍न जाँदा दुलहा आइपुगे, र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे, र ढोका बन्‍द भयो।११. “पछिबाट ती अरू कन्‍याहरू आइपुगे र यसो भन्‍न लागे, ‘प्रभु, प्रभु, हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस्‌!’ १२. “तर उनले जवाफ दिएर भने, ‘साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, म तिमीहरूलाई चिन्‍दिनँ।’१३. “यसकारण जागा रहो, किनकि त्‍यो दिन र त्‍यो घड़ी तिमीहरूलाई थाहा छैन।
अनि भोजमा आएका अतिथिहरूले आदरको स्‍थान छानेका देखेर उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्‍टान्‍त भन्‍नुभयो:
मिथुन राशिफलको दुई घण्टा हुन्छ। येशूले शिक्षा दिनुभयो एक निश्चित तर अज्ञात घण्टा छ जब विवाहको दिन आउँछ र धेरैले यो गुमाउनेछन्। यो दस कुमारी कन्याको दृष्टान्तको उल्लेख हो। केहि तोकिएको घन्टाका लागि तयार थिएनन् र त्यसैले छुटे। तर घण्टा अझै खुला छ र विवाह भोजको निम्तोहरू सबैलाई पठाइँदै छ। यो अहिले हामी बाँचिरहेको घडी हो। हामी केवल आउन आवश्यक छ किनकि भोज तयार गर्ने काम उहाँले गरिसक्नुभएको छ।
तपाईंको मिथुन पठन
तपाईं र म आज मिथुन राशिफल तलको तरिकाबाट लागू गर्न सक्छौं।
मिथुनले घोषणा गर्नुभयो तपाईंको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्धको लागि निमन्त्रणा अझै खुला छ। ताराहरूले केवल यो सम्बन्धमा तपाईंलाई आमन्त्रित गरिएको सबै अन्य क्रियाकलापहरू ग्रहण गर्नेछन् – ब्रह्माण्डको शाही परिवारको साथसाथै दिव्य विवाह – जुन कहिल्यै नाश हुँदैन, बिग्रिनेछैन वा हराउनेछैन। तर यो दुलहा सदाको लागि कुर्ने छैन। त्यसकारण सचेत र पूर्णतया विवेकी दिमागका साथ, यो दुलहा आउँदा प्रकट हुँदा तपाईंमा ल्याइएको अनुग्रहमा आशा राख्नुहोस्।
तपाईंको आकाशीय पिताको आज्ञाकारी बच्चाको रूपमा, जब तपाईं यस गन्तव्यको अज्ञानमा बस्नुहुन्थ्यो खराब अभिलाषाहरू अनुरूप काम नगर्नुहोस्। किनकि तपाईं बुबालाई बोलाउनुहुन्छ जसले प्रत्येक व्यक्तिको काम निष्पक्ष ढंगले न्याय गर्नुहुन्छ, श्रद्धालु डरले तपाईंको समय यहाँ अनजान रूपमा बाँच्नुहोस्। दुर्व्यवहार र सबै छल, कपटी, ईर्ष्या र सबै प्रकारको निन्दा जस्ता सबै गुणहरूबाट आफूलाई छुटकारा दिनुहोस्। तपाईंको विस्तृत कपालका शैलीहरू र सुनको गहना वा राम्रो कपडा लगाएर तपाईंको सौन्दर्य बाहिरी सजावटबाट आउँदैन। बरु, यो तपाईंको भित्री आत्मको हुनुपर्दछ, कोमल र शान्त आत्माको सुन्दरता, जुन आउँदै गरेको दुलहाबाट प्रशंसनीय छ।
अन्तमा, तपाईका वरपरका मानिसहरूप्रति सहानुभूतिशील, मायालु, कोमलता र नम्र हुनुहोस् । यी विशेषताहरू तपाईंको वरपरका व्यक्तिहरूलाई प्रदर्शन गर्नाले तपाईंको भाग्येमा तपाईंको अनुकूलता देखाउँछ – किनकि तपाईंको वरपरका मानिसहरूलाई उही राजकीय जन्मसिद्ध अधिकार र विवाहमा आमन्त्रित गरिन्छ।
मिथुन राशिको कथा मार्फत र मिथुनम अझ गहिरिएर
उद्धारकले उहाँले आफ्नो छुटकारा पूरा गर्नुहुनेछ भनेर मिथुनलाई धेरै पहिले ताराहरुमा राख्नुभएको थियो। मिथुन राशिले हाम्रो जेठो भाई र हाम्रो दिव्य विवाहमा आउँदै गरेको स्वीकार्दछ। तर त्यो भन्दा पहिले, कर्कटको चिन्ह हुनु पर्छ जुन हामी पछि हेर्छौं।
यहाँको प्राचीन ज्योतिषा ज्योतिषशास्त्रको आधार सिक्नुहोस्। कन्याको साथ यसको सुरुवात पढ्नुहोस्।
तर मिथुनको बारेमा लेखहरूबाट अझ पढ्न
• रामायण भन्दा राम्रो एक प्रेम महाकाव्य
• तपाईंको अन्य विवाहको निमन्त्रणा
•स्वर्गलोक, धेरै आमन्त्रित तर …
लेखक Ragnarप्रकाशित 06/06/2021 06/06/2021 श्रेणिया ज्योतिषा (Jyotish)टैग्स दैनिक राशिफल, मिथुन अर्थ, मिथुन कुंडली, मिथुन महिना, मिथुन मिथुन, मिथुन राशितपाईको मिथुन रासीलाई प्राचीन राशिफल पर एक टिप्पणी छोड़ें